Amerika Latina · Jolay, 2014 · Global Voices teny Malagasy
Amerika Latina · Jolay, 2014
Tantara mikasika ny Amerika Latina tamin'ny Jolay, 2014
Arzantina 27 Jolay 2014
Mediam-bahoaka 26 Jolay 2014
Brezila 18 Jolay 2014
Azia Afovoany sy Kaokazy 17 Jolay 2014
Meksika 16 Jolay 2014
Efa manomboka ireo tetikasa nahazo vatsy 2014 avy amin'ny Rising Voices. Hohenointsika amin'ny alalan'ny lahatsoratra bilaogy isam-bolana ny fandroson'ireo. Ny tetikasa "Atsimon'ny Atsimo" ao Mérida, Meksika no hanomboka izany, izay hiara-hiasa amin'ireo mpitendry mozika ao an-toerana sy hizara ireo mozika ao amin'ny aterineto, anisan'izany ireo hira amin'ny teny indizeny.
Karaiba 16 Jolay 2014
Però 15 Jolay 2014
Hanairany ny olon-tiany mandritra ny tsingerintaona nahaterahany, efa voaomany avokoa ny zavatra rehetra amin'ny fanomezana saribakoly vorodamba goavana, saingy nahatonga azy tsy maintsy handeha tongotra [es] maherin'ny efatra miles (fito kilometatra) nibata ilay fanomezana goavambe ny fitokonan'ny fitaovam-pitaterana. Ity no tantara tsara fiafara an'i Jonatan Rosas, avy any amin'ny distrikan'i Yanacancha, any...
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 14 Jolay 2014